हनुमानढोका बहुउद्देयीयको दोस्रो सेवा केन्द्र बौद्धमा | सहकारी सञ्चार
हनुमानढोका बहुउद्देयीयको दोस्रो सेवा केन्द्र बौद्धमा
काठमाडौं । पशुपती प्लाजा, खिचापोखरीमा प्रधान कार्यालय रहेको हनुमानढोका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बौद्धमा सदस्य सेवा केन्द्र संचालन गरेको छ ।
संस्थाले हिजो एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कार्यालयको सेवा शुभारम्भ गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र गौतमले रिबन काटेर कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
यसअघि संस्थाले कालीमाटीमा सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेर सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो ।
बौद्ध क्षेत्रका सदस्यहरुलाई घरपाईकमा गुणस्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख अश्विन भट्टराईले बताउनुभयो । संस्थाले विश्वाशिलो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई उच्च प्रथमिकता दिएकाले हाल संस्थामा ६ हजार भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध बनेको जानकारी दिनुभयो ।
संस्थाले आफ्नो सेवा सुविधालाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै सदस्यलाई एस.एम.एस. तथा मोबाईल बैंकिङ्ग सेवा मार्फत नगदरहित कारोबारको सुविधा दिँदै आएको छ ।
संस्थाले संचालन गरेको एच.डी. ई सेवा उपभोग गर्ने सदस्यले मोबाईलबाटै आफ्नो खातामा रहेको रकमको जानकारी लिनुका साथै संस्थाको खातामा रहेको रकम आफ्नो नाममा रहेको अन्य बैंकको खातामा समेत स्थानान्तरण गर्न सक्छन् ।
यो सेवा मार्फत सदस्यले घरमै बसेर बिद्युत, खानेपानी र टेलीफोनको महशुल भुक्तानी गर्न, विभिन्न हवाई कम्पनीको टिकट खरिद गर्न र फिलिम हलको टिकट काट्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।
यसैगरी एनटीसी, एनसेल, डिसहोम, सिमटिभी, सुविसु, वोल्र्डलिंक लगायतका सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने ईन्टरनेट तथा मोबाईल सेवाको समेत मोबाईल मार्फत नै बिल भुक्तानी गर्नसक्ने जानकारी दिएको छ ।
सदस्यहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै संस्थाले सन्ध्याकालीन काउण्टरको व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत कारोबार गर्दै आएको छ । चेक क्लियरिङ्ग सुविधा प्रदान गरेको छ ।
अन्तर सहकारी सहकार्य मार्फत सदस्यहरुलाई शान्तिभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत रकम जम्मा तथा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
संस्थाले आफ्नो बहुउद्देश्यीय प्रकृति अनुरुप चितवन जिल्लामा संचालन गरेको स्टेपअन फुटवेयर कारखानाबाट हाईटेन ब्राण्डका जुत्ता चप्पल निर्माण गर्दै आएको छ । सो कारखानामा निर्मित जुत्ता चप्पल खरिद गर्ने सदस्यलाई संस्थाले भारी छुटको ब्यवस्था गरेको छ ।